विराटनगरका कुन स्कुलको कस्तो नतिजा ? - Merodesh.news
विराटनगरका कुन स्कुलको कस्तो नतिजा ?
विराटनगर, १२ असार। विराटनगरका निजी विद्यालयहरुले एसईई परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याएको दावी गरेका छन् । शनिवार साझ प्रकाशित एसईई परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याएको निजी विद्यालयहरुले दाबी गरेका हुन् ।
विराटनगरमा रहेको एभरेष्ट स्कुलले आफ्नो विद्यालयकी एक छात्राले नेपाल टप गरेको दावी गरेको छ । स्कुलकी छात्रा कृतिका थापा नेपाल टप भएको विद्यालयले दाबी गरेको हो । एभरेष्टबाट १४६ विद्यार्थीले एसईई परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । जस मध्ये ९० जनाले ‘ए प्लस’ र ५६ जनाले ए ल्याएका छन भने कृतिका थापाले नेपाल टप गरेको स्कुलको दाबी छ । २२२ जना विद्यार्थी सहभागि भएको विकेभिएमबाट ११० जनाले ए प्लस, १०३ जनाले ए , ८ जनाले बि प्लस र १ जनाले बि ल्याएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै सगरमाथाबाट सहभागी १ सय ८१ विद्यार्थी मध्ये ५१ जनाले ए प्लस, १२५ जनाले ए र ५ जनाले बि प्लस ल्याएको विद्यालयका प्रिन्सिपल विनोद अधिकारीले जानकारी दिए । १०७ विद्यार्थी सहभागि सेन्ट जोसेफ स्कुलबाट ७७ जनाले ए प्लस, र ३० जनाले ए ग्रेट ल्याएका छन् । जेसी बाल सदनबाट सहभागी ६७ विद्यार्थी मध्ये ६ जनाले ए प्लस, ३३ जनाले ए र २७ जनाले बी प्लस ल्याएका छन् । ४३ जना विद्यार्थी सहभागि भएको मदरटेरेसा स्कुलबाट सबै विद्यार्थीले ए ग्रेट प्राप्त गरेका छन् ।
भानु स्कुल विराटनगरबाट सहभागी ३६ जना विद्यार्थी मध्ये ६ जनाले ए प्लस, १६ जनाले ए, १० जनाले बी प्लस, र ४ जनाले बी ग्रेट ल्याएका छन् । त्यस्तै कान्तिपुर सेकेन्डरी स्कुलबाट सहभागि २६ जना विद्यार्थी मध्ये ४ जनाले ए प्लस, १४ जनाले ए र ८ जनाले बी प्लस प्राप्त गरेका छन् । ६६ जना विद्यार्थी सहभागि बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट ११ विद्यार्थी ए प्लस, ३४ जना ए र २१ जना विद्यार्थीले बी प्लस ग्रेट ल्याएका छन् । त्यस्तै अन्नपूर्ण एकेडेमी विराटनगरबाट १ जना विद्यार्थीले ए प्लस, १३ जनाले ए र ९ जनाले बि प्लस ल्याएका छन् ।
त्यस्तै मोर्डन एरा स्कूलबाट ६० जनाले दिएको परीक्षामा ४ जनाले ३.९ जीपीएसहित उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको स्कूलका संस्थापक निर्देशक इन्द्र राईले जानकारी दिए । त्यसैगरी विराटनगरको हाटखोलामा रहेको ग्रेडेड स्कूलबाट ३८ जना विद्यार्थीले दिएको परीक्षामा सुरज खड्का उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका छन् । उनले ३.८ जीपीए ल्याए स्कूल टप गरेका छन् । ४ जनाले ३.६ जीपीए, २१ जनाले ३.२ देखी ३.५ जीपए र १३ जनाले २.८ जीपीए भन्दा बढी ल्याएको स्कूलका प्रिन्सिपल प्रेमलालसिंह सुवालले जानकारी दिए ।
विराटनगरमा रहेको पूर्वाञ्चल विद्या सदन, नमुना बोर्डिङ स्कूल, गौतम बुद्ध, केभिएम, अरनीको स्कूल, लर्डबुद्ध,अर्किड, सिद्धार्थलगायत निजी स्कूलहरुले उत्कृष्ठ नतिजा ल्याएको दाबि गरेका छन् ।